नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीको नाममा सम्बोधनः पूर्णपाठसहित
April 14, 2019 खबर खुराकLeaveaComment on नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीको नाममा सम्बोधनः पूर्णपाठसहित
काठमान्डौं, १ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट नयाँ वर्षको अवसरमा देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार प्रगति सुनाउने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । नयाँ वर्ष २०७६को अवसरमा आइतबार बिहान बालुवाटारबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न सोध्ने तरिका फेर्न समेत सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले गएको आम निर्वाचनमा जनताले स्थायित्व र विकासका पक्षमा मत दिएको चर्चा गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सरकारले त्यसका लागि जग बसाल्ने काम गरेको र त्यसलाई अब अघि बढाउने समेत बताए । आफ्नो मात्रै स्रोत साधनबाट विकास गर्न ढिलो हुने भएकोले बाह्य प्रविधि भित्रयाउनकालागि जोड दिइएको समेत बताए ।
एक वर्षमा के नै भयो भनेर निराशा व्यक्त नगर्न आग्रह गर्दै उनले सरकारलाई प्रश्न सोध्ने तरिका फेर्न आग्रह गरे । यो वर्ष कति बाटो बन्यो, कति कानुन बने पानी जहाज कार्यालय खुल्यो कहिलेबाट सञ्चालन हुन सक्छ ? सामाजिक सुरक्षाको अभियानले
जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमाबाट आमा बाबालाई कस्तो फाइदा हुन्छ ? जनतालाई कसरी लाभ हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भएको सहभागिताबाट नेपालले के फाइदा पाउन सक्छ भन्ने जस्ता विषयमा प्रश्न सोध्न आग्रह गरे । उनले अबको नेपालको एजेण्डा शान्ति,एकता र विकास भएको समेत बताए ।
प्रश्न सोध्नेलाई व्यवहारबाट जवाफ दिन सरकार तयार रहेको समेत उनले बताए । देश र जनता नै सरकारको प्राथमिकता भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र राज्यको अनधिकृत दोहनलाई बन्द गर्ने र जालझेल गरेर हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गर्दै ल्याइने समेत बताएका छन् ।
उनले यो वर्ष पृथकतावादको अन्त्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गरे । उनले कुनैपनि अतिवादलाई स्थान नहुने भन्दै प्रतिगामी गतिविधिका विरुद्धमा पनि कडाइ गरिने जनाएका छन् ।
उनले तीब्र विकासका लागि देशलाई समयको अभाव भएको बताउँदै युएइका प्रधानमन्त्रीको पुस्तकमा भनिए झैं बाँच्नका लागि छिटो दौडिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको समेत जनाए । विकासका लागि नेपाल अफ्रिकी सिँह र हरिणको जस्तै दौडिनुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाए ।
उनले आफूपनि विकासका लागि बिहानदेखि बेलुका सम्म दौडिरहेको बताउँदै एक वर्षको अवधिमा आफू ३१४ वटा कार्यक्रममा सहभागी भएको समेत प्रधानमन्त्रीले बताए । यसअनुसारका परिणाम पनि अहिले देखिन थालेको उनको भनाई थियो ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
Tagged नयाँ वर्षकाे शुभकामना
तपाईकाे राशिफलः वि.सं.२०७६ साल वैशाख १ गते
समिट एयरको जहाज दुर्घटनाः को–पाइलट र एक प्रहरीको मृत्यु, तीन घाइते
October 21, 2018 खबर खुराक
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्-एउटै जन्ममिति भएको म एक्लै पो रहेछु कि !
March 3, 2018 खबर खुराक
April 10, 2018 न्यूज डेस्क